Ukuphononongwa kweReed Reed 'Kude Kwisihlwele SaseMadding' - Iimuvi
Eyona Iimuvi Ukubuya 'kwesihlwele esilahlayo'
Ukubuya 'kwesihlwele esilahlayo'
UMatias Schoenaerts kunye noCarey Mulligan kwi Kude kwisihlwele saseMadding .
Ukuzama ukuphucula kwi-cinema yeklasikhi enkulu yinto ebubudenge, kunye nokutshayela kukaJohn Schlesinger, othandana no-1967 wombhali wenoveli uVictoria uThomas Hardy Kude kwisihlwele saseMadding , Ngomsebenzi wekhamera omnandi kaNicolas Roeg kunye nemidlalo engalibalekiyo nguJulie Christie, Alan Bates, Peter Finch kunye neSitampu seTerence, isagqibelele njengoko injalo.
Kude KUNYE NESIXUKU SOKUTSHAYA ★ ★ ★
( 3/4 iinkwenkwezi )
Ibhalwe ngu: UDavid Nicholls
Yeluswa nguwe: UThomas Vinterberg
Inkwenkwezi: UCarey Mulligan, uMatias Schoenaerts kunye noMichael Sheen
Ixesha lokuqalisa: 90 imiz.
Ngethamsanqa, umlawuli odakumbileyo waseDenmark uThomas Vinterberg akazami nokuhombisa okanye ukuphucula. Yonakaliswe kukuphosa iimpazamo kwaye yancitshiswa kwisishwankathelo senoveli yeHardy, olu phononongo lomfazi omhle odlakadlaka phakathi kothando lwamadoda amathathu kodwa akakwazi ukukhetha inye kuphela engaphumeleli ukuthatha umbono wobomi belizwe kunye I-canvas yejografi yaseBritane icaciswe gca ngokucacileyo nguMnu Schlesinger. Okwangoku, ubuhle bayo buninzi kwaye le nguqulo ifilimu yenoveli kaHardy yesine kufanelekile ukuba ibonwe. Iphakama entloko nasemagxeni ngaphezulu kwento ebesiyibona mva nje.
Ukuseta ziintlambo eziluhlaza zekalika zeDorset kwii-1870s, apho uBhatshebha Everdene ngumfazi ngaphambi kwexesha lakhe. Emva kokufumana ifama kubazali abasweleka besebancinci, ingqondo yakhe elukhuni yokuzingca okungagungqiyo kunye nokusombulula kwamangalisa amadoda kwiilali ezingabamelwane. Ungumanduleli wenkulungwane ye-19 yeWilla Cather-othandweni nomhlaba kwaye okwesibini kuye kwindoda enamandla nokuzithemba. Usisitabane kwaye uyathandana, unxiba iihempe zokulanda kunye nokuhombisa kwaye akanakukhuseleka kwi-virk musk kunye nomtsalane wesini esahlukileyo, kodwa uhlala enomdla kwezolimo, ukukhwela ihashe kunye nokudubula kunemidaniso kunye nokuthandana. Okwangoku, utsala abantu abathathu abathandekayo ababalaseleyo ebomini bakhe, esihogweni esizimisele ukumkhusela nokumthanda.
Okokuqala, kukho uSajini uFrancis Troy (uTom Sturridge), igosa eliselula eligadulayo nelizingcayo elihlazisiweyo ngokujiliswa esibingelelweni. Okwesibini, umnini-mhlaba odumileyo, ophakathi, uWilliam Boldwood (obalaseleyo uMichael Sheen, kwintsebenzo kude kakhulu kwindima yakhe njengoDavid Frost Iqabaka / iNixon kunye noTony Blair Ukumkanikazi ), oza ebaleka xa emthumelela i-valentine enobubi kwaye enganyanisekanga. Umnika ukhuseleko, uzinzo kwezemali kunye nesithembiso sokuhlawula amatyala kwifama yakhe. Ummangalelwa wesithathu nguGabriel Oak (umfundi waseBelgium u-Matthias Schoenaerts), umalusi oqaqadekileyo kodwa ohluphekileyo owancitshiswa wasebenza njengomqeshwa ka-Bathsheba emva kokuba inja yegusha engenamava ibaleka umhlambi wayo eweni. Konke anokukunika luthando kunye nobomi bokuzinikela kunye nokusebenza nzima ukugcina ipropathi yakhe. Kukungonwabi ukuba ubotshelelwe emtshatweni kwaye uzimele kakhulu ukuba ungabi ngowendoda enye yodwa,uyabagatya bonke, ekhokelela kwilishwa elibuhlungu lokuziphatha okubi ngokwesini, ukukrexeza, ukungcatsha, ukophuka kwentliziyo kunye nokuzama ukuzibulala.
Lo mboniso bhanya-bhanya usathandana, ngamanye amaxesha usiya kumda wobundlobongela, kodwa apho uSchlesinger wayenomdla ekwakhiweni, esenza ulandelelwano olupheleleyo lokutshona kwelanga okumfusa kunye nesafron kusasa kwelizwe elikhulu lesiNgesi, uMnu. Vinterberg unomdla wokuhambisa izinto ukusuka kwenye. yalatha kokulandelayo, egxininisa ubumnyama obumnyama bendawo yangaphakathi kunye nokwenza uhlobo lweparanoid claustrophobia yokuba uBhatshebha asokole kuyo.
Isiqingatha sesibini sefilimu sikhangeleka singxamile, sinemifanekiso yonke evela kwiphepha elinamaphepha angama-300 lisikiwe, lincitshisiwe laya kumgca wencoko yababini okanye lasuswa. Umtshato kaBhatshebha ongaginyisi mathe kuSgt. UTroy, ityala lakhe lokungcakaza, kunye nothando lwakhe ngesicakazana esibalekileyo (iJuno Temple) konke kubonakala ngathi yimibhalo esemazantsi. Eyona asethi inkulu yefilimu yenye yeenkwenkwezi ezijikajika nguCarey Mulligan, odibanisa uBhatsheba ubuhlazo bobutsha kunye nenkohliso enamaxesha okuzingca kwabasetyhini, ngelixa ubuthathaka bayo obukhulu kukuphosa kukaMnu Schoenaert njengoGabriel Oak. Ungumqolo webali kwaye uAlan Bates uwufumene ngokupheleleyo. UMnu Schoenaerts onamagingxi-gingxi wayengalibaleki kwifilimu ephumelele amabhaso Inkunzi yeBull kwaye ejongene noMarion Cotillard eJacques Audiard's Umhlwa kunye nethambo , kodwa ngokungafanelekanga ulahlekile apha. Isimbo sakhe seFlemish sigcina singena endleleni xa kufuneka achaze iimvakalelo zakhe ezingcolileyo kuBhatshebha ngendlela ebuthathaka. Isiphumo kukuba uhlala ebonisa ubudlova xa ibali lifuna amandla.
Okwangoku, kukho into ekumgangatho ophezulu eyaneleyo yokwenza uhambo lokuya Kude kwisihlwele saseMadding kufanelekile. Isihloko sokuqala sikaThomas Hardy sivela kumbongo we-1751 nguThomas Grey obhekisa kwilizwe lecawe elikude kude nesiphithiphithi saseLondon. Eminye ikhubalo ilahlekile ngoku, kodwa nkqu neziphene zayo, isiqingatha sesihlwele esinomsindo sibhetele kunokuba singekho.
I-CBS Sele ikwimeko yokulahlekelwa ngamalungelo amaNFL kumabonakude
Ukudibana 'neNgelosi yokuTshabalalisa' bekufanele ukuba ikhutshiwe ngaphambi kokuba ifike eSiteji
Uvandlakanyo lwenkulumbuso yamadoda: Ukusebenza kweT Testosterone?
Ukutsalwa kwePirate Bay ngokuSebenzayo kuchaphazela ubumfihlo kwi-Intanethi kuba akukho nto inokuyenza
Sabrina umchweli unenzondo onika yona
umntu wokugqibela emhlabeni urhoxisiwe
amabali avela kwi-crypt cryptkeeper
free ukuthandana zokusebenza ezisebenzayo
iphi iofisi eya kuyo
Yeyiphi eyona oyile yecbd ilungileyo
UBradley cooper jimmy fallon ehleka